‘पुरूषको भागको अपराध कति ? « Pana Khabar
‘पुरूषको भागको अपराध कति ?
हिजो २४ गते नारि दिबस । नारि दिबसको अबसर पारेर मकवानपुर जागरण अभियानको समुहले प्रदेस नम्बर ३ को अस्थाही राजधानी तथा औधोगिक नगरी हेटौडाको ओम्याक्स सिनेमा हलमा चलचित्र ‘पंचायत’ को च्यारिटी सो को आयोजना गर्यो । चैत्र २ गते देसभरि प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य लिएर चलचित्र ‘पंचायत’ को च्यारिटी सो नै किन रोज्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
मकवानपुर जागरण अभियान बिदेसीको दान सहयोगमा खुलेको संस्था हैन । संस्थामा आबद्ध भएका सामाजिक अभियन्ता, देस बिदेसमा छरिएर बस्नु भएका सहयोगी मनहरुको सहयोगबाट उठेको रकमले दिन दुखिहरुको घाउमा मल्हम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देस्यले खोलिएको संस्था हो ।
च्यारिटी सो आयोजनाको समयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि गरिएको थियो । चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकारहरुले चलचित्रको बारेमा आफ्नो धारणा राखे पश्चात आयोजकको तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णराज कोइरालाले हामीलाई ‘मह’ जोडीको आउंदै गरेको चलचित्र ‘शत्रुगते’ को च्यारिटी शो राख्नु पर्छ भन्ने अफर पनि नआएको हैन तर हामीले ‘पंचायत’ चलचित्रको बारेमा गहिरियर बुझ्यौ र हाम्रो संस्थाको सबै अभियन्ताहरुको राय र सुझाव अनुसार चलचित्र ‘पंचायत’ लाई नारि दिबसको दिन पारेर प्रदर्शन गर्नु पर्छ भन्ने अठोट लिएर चलचित्रको च्यारिटी सो को आयोजना गरेको हौ ।
चलचित्रको दर्शक बनेर आउनु भएको अनुभवी छापा,रेडियो पत्रकार तथा कवि छबी अनित्यले पुरै सिनेमा हेरिसके पछी गज्जबको राय सामाजिक संजाल फेसबुकमा पस्किनु भयो ।
अनित्य लेख्नुहुन्छ ‘ यो एउटा संयोग थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन हामी ‘पञ्चायत’ हेर्दै थियौँ ।
यो कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजको चित्रण होइन ।
चलचित्र मध्यान्हसम्म आइपुग्दा च्यारिटी आयोजक संस्था मकवानपुर जागरण अभियानका संयोजक कृष्ण कोइराला आँत्तिईसकेका थिए । च्यारिटी शो हेर्न अधिकांश दिदीबहिनीहरूकै उपस्थिति थियो । तर त्यतिञ्जेलसम्म चलचित्रमा आएका संवाद उत्तिकै ‘छाडा’ लाग्थे । ‘आइमाई गफ’ भनेर बुझ्नुस् (अन्यथा नलिनुहोला) । नायिका नीता ढुंगानाले आफूलाई ‘नङ्ग्याउन’ कुनै कसर बाँकी राखेकी थिइनन् । मध्यान्तरमा शौचालयतिर लम्किँदै गरेका कोइरालाको निधारमा पसिना छुटिसकेको थियो ।
तर चलचित्रमा यो आवश्यक थियो । मलाई लाग्छ – अझ राखिनैपर्ने संवाद र दृश्य राख्न निर्माण टोली हिच्किचायो वा समाजको डर मान्यो । नत्र चलचित्रको कथाले यो भन्दा बढी नै माग्छ । सिंगै कथा यहाँ नभनौँ । चलचित्र चैत्र २ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । हलसम्म पुगेकोमा तपाईँले पछुतो मान्नुहुने छैन । यति जरूर भन्छु – नेपाली सिने जगतमा ‘आर्ट मूभी’को ट्रेन्ड अरू फराकिलो भएको छ यो चलचित्रबाट । कमर्सियल दर्शकले यसलाई रुचाएनन् भने पनि निर्माण टोली आँत्तिनु पर्दैन ।
चलचित्रकी मूख्य पात्रको एउटा संवाद जरूर राख्छु – “हो, ममाथि बलात्कार भएको छैन । तर मजा त तपाईँले पनि उत्तिकै लिनुभयो नि !”
प्रचारप्रसारमा कहीँकतै पञ्चायती व्यवस्थाका विषयमा बनेको चलचित्र भनिएको भए त्यसलाई भ्रम मान्नुहोला । यथार्थ यो होइन । पञ्चायत विशुद्ध सामाजिक विषयवस्तु हो; त्यो पनि नारी संवेदनाको । अझ विवाह अगावै कौमार्य गुमाउने किशोरीहरूको सौन्दर्यको कथा हो पञ्चायत । समाजका अघिल्तिर ‘घरपरिवारको नाकै काट्ने’ काम एउटी किशोरीले गरिरहँदा ‘पुरूषको भागको अपराध कति ?’ भन्ने प्रश्नको खोजी हो पञ्चायत ।
बधाई लेखक निर्देशक शिवम् अधिकारी र सम्पूर्ण टीमलाई । चलचित्र हेर्नैपर्ने खालको बनेको छ ।
(पानाखबर डटकमको लागी हेटौडाबाट जनकमान डंगोल । जनकमान डंगोल मकवानपुर जागरण अभियानको उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: २०७४/११/२५ गते ।